मृत्यु पर्खिरहेछ -राशि पाण्डे – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०२:३३ English
मृत्यु पर्खिरहेछ -राशि पाण्डे
सम्पूर्ण व्यथालाई आँखामा समेटेर प्रसववेदनाले भैँसी उठबस गरिरहेको छ । केटाकेटीहरू भैँसीलाई चारैतिरबाट घेरेर रमिता हेरिरहेका छन् । घरभरि खुसी छाएको छ ।
के ब्याउने हो ? घरधनीबुढी कुँडो पकाउँदै गुनिरहेकी छिन् । पाडो पाई भने त के काम ? मासु खान हुन्न, हलो जोत्न हुन्न । बित्थामा आधा दुध त त्यसैलाई पोस्दै ठिक हुन्छ । फेरि तिन, चार वर्ष पाल्यो, देवीलाई बलि चढाउनेहरूले कति नै दिइहाल्छन् र ? तिन, चार सय त हो नि ? दुध नै हजार–पन्ध्र्र्र सयको खाइदिन्छ ….. तराईमा त थुप्रै पैसा दिन्छ रे पाडाको पनि ? के गर्नु त्यहाँ दिएर ? लैजान सकिने होइन ?
घाँसपात पाए त के थियो नाइँ …. दुहुनीलाई त एक भारी हरियो खोज्न कति गारो परिसक्यो ? वनपालेले अचेल स्याउलै काट्न दिन्न । कसले पाल्न सकोस् पाडो ? फाल्दिनै प¥यो । घरधनीबुढी अठोट गर्छिन् ….. पाडी पाए त, ब्याँउछ, दुध दिन्छ, गोठ बढाउँछ भन्नु ?
वाँइँय ….. पाडो उनलाई बोलाउँछ । सुँध्छ यताउता । थुन खोजिरहेछ ऊ, उनैलाई आफ्नी आमा ठानेर । जिउ राम्ररी सुकिसकेको छैन । काँपिरहेछ जाडाले थरथर । बिचरो निरीह प्राणी, जन्मने बित्तिकै टुहुरो बनाइएको बच्चा, मर्नका लागि बगरमा मिल्काइएको बच्चा, आफ्नी आमालाई “आमा” सम्म भन्न नपाएको मुखसम्म हेर्न नपाएको बच्चा । वाइँ ऽ ऽ वाइँ गरी आफ्नै हत्यारालाई आमा सम्झिएर स्नेह पोखिरहेछ, स्नेह मागिरहेछ ।
पाडो वाइँ ऽ ऽ वाइँ ऽ गरी उभिन खोज्छ । उनलाई पच्छयाउन खोज्छ । भर्खर जन्म लिएको बच्चा, चार खुट्टाले उभिने प्रथम प्रयास । खुट्टा लरखराउँछ, साथ दिन्न खुट्टाले ऊ लड्छ । थेचारिन्छ भुइँमा । ढुङ्गै, ढुङ्गाको सारो भुइँ शरीरभरि दर्द व्याप्त हुन्छ । करुण स्वर निस्कन्छ ….. वाइँ ऽ ऽ… ऊ दीन नजरले लाई ओझेल नहुन्जेल नजरले पच्छ्याइरहन्छ ……..
भैँसी कुँडो रित्याउँछ । साल पनि झर्छ । बच्चाको चालचुल कतैबाट पाइँदैन । उसको सम्पूर्ण ममत्व हाहाकार गर्न लाग्छ । सम्पूर्ण वात्सल्य खनिएर आउँछ । ऊ खड्कुलो सुँध्छ । मानिसलाई सुँध्छ । कसैबाट आफ्नो अंशको गन्धसम्म पाउँदैन । कसैबाट आफ्नो मुटुको टुक्राको वाससम्म आउँदैन । ऊ कुकुरलाई सुँघ्न लम्कन्छ । कुकुर उसको थुतुनो ल्याप्प चाटी दिन्छ, पुच्छर हल्लाउँदै । ऊ सिङ झटारेर हिर्काउँछ कुकुरलाई । यसैले मेरो बच्चा खाइदियो कि ? कुकुर क्वाइँ गरी पर भाग्छ । ऊ फ्वाँ ….फ्वाँ …… गरी आफ्नो नैराश्य देखाउँछ । कल्चौँडो दुधले टन्न भरिएको छ । गानिएर दुख्न लागिरहेछ । टन्कन लाग्छ दुधको फाँचो । ऊ छटपटाउँन लाग्छ । पाडो खोज्दछ धँइँधुइँती । दाम्लो चुडाउला झैँ गर्दछ ।
“च्व…. च्व…… ह्…….ह्…. घरधनीबुढी भैँसीलाई फुल्याउने प्रयास गर्दछिन् । भैँसी फनफनी किलामा घुम्दछे । ह…… ह…. चुप…… । उनी ठुलो स्वरमा भैँसीलाई हकार्दछिन् । छोरी भैँैसीलाई गुँड चटाउन लाग्दछे । भैँसी केही शान्त हुन्छ । दुहेर सकिन्छ । भैँसीको अाँखाभरि आँसु आउँछ, पारोभरि दुध ।
पाडो बगरमा कठ्याङ्ग्रिरहेको छ, कराइरहेको छ । ऊ घाँटी तन्काएर चारैतिर हेर्न लाग्छ । सेतो चामलको चौलानी जस्तो पानी आफ्नो गतिमा बगिरहेछ । एकातिर ठाडो भिर छ अक्करको । कतै छैन उक्लने ठाउँ । ढुङ्गा सुँग्घ्छ ऊ ? चाट्छ । निर्जीव ढुङ्गा केही बोल्दैन, केही भन्दैन । ऊ यताउता आमालाई खोज्छ ….. खानेकुरा खोज्छ । थुन खोज्छ– एउटा अन्तःप्रेरणा ।
काँ …. काँ …….. काग कराउन लाग्छन् । बिहानको मिर्मिरे चारैतिर फैलिन सुरु भएको छ । जीवनको चौथो सूर्योदय । पाडो टाउको उठाएर हेर्न खोज्छ । शक्ति नै छैन शिर उठाउने, सूर्यलाई नमस्कार गर्ने । काग अझ नजिकिन्छ । टाउको हल्लाएर काग धपाउने कोसिस गर्छ ऊ । कान पनि मुस्किलले हल्लाउन समर्थ हुन्छ । काग टाउकै नजिक आइपुग्छ । क्वाप्प ठुँङछ आँखामा । पीडाको लहर शरीरभरि व्याप्त हुन्छ । ऊ अाँखा झिमिक्क पार्छ । काग पर भाग्छ ।
काँ…..काँ…. अरू कागहरू पनि आइपुग्छन् ।…. थुप्रै थुपै्र कागहरू…. पाडो अाँखा खोल्दछ । केही केटाकेटीहरू कागलाई ढुङ्गाले हिर्काएर धपाइरहेका छन् । कति बेलासम्म उनीहरू कागलाई धपाउन सक्छन् र ? कति दिनसम्म तिनीहरू पाडाको पहरेदारी गर्न सक्छन् ?
पर माथि आकाशमा गिद्धहरू उडिरहेका छन् । उसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ? ऊ आफ्नी आमालाई एकपल्ट फेरि सम्झन खोज्छ । कुनै आकार, कुनै आकृति उसको मानसपटलमा बन्दैन । अनि झल्याँस्स त्यो घरधनीबुढीलाई सम्झन पुग्छ । आमा त्यही हो कि ? किन हो, ऊ ती बुढीलाई आमाको रूपमा स्वीकार्न सक्दैन । पाडो तन्द्रा अवस्थामा पुग्छ– अनि घरधनीबुढीले लगाएको फरिया पखेटा बन्छ, त्यो बुढीको अनुहार गिद्धजस्तै आकाशमा उड्न लाग्छ । पाडो ती गिद्धहरूलाई ठम्याउन खोज्छ, राम्ररी चिन्न खोज्दछ, बुढीकै अनुहार उसको आँखामा घुमिरहन्छ, झलझली मान्छेकै चित्र उसको नानीमा नाँचिरहन्छ ………….
२० श्रावण २०६९, शनिबार १९:१२ मा प्रकाशित